Adi-hevitra mafonja ho an'ny famerenana ny valisoa ho amin'ny fitokisana
Torohevitra mahomby mba hahazoana tombony bebe kokoa
Famindrana ny valim-pitiao tsy mivadika
Nanao ny zavatra tsara rehetra ianao mba hananganana tahirin-kilaometatra maromaro sy teboka - manararaotra tombontsoa avy amin'ny fisoratana anarana sy tolotra manokana avy amin'ny valisoanao momba ny carte de crédit ary mampiasa ny karatrao amim-pahendrena. Amin'izao fotoana izao, ianao dia somary vola maimaim-poana, vonona ny hanavotra ho an'ny tombontsoa isan-karazany, ny fanavaozana ary ny fialamboly. Tsy isalasalana fa ny ampahany tsara indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny fanangonana hevitra.
Misy mpanome avy amin'ny carte de crédit sasany ahafahanao manova ireo teboka ahazoana vola (matetika amin'ny latsaky ny iray hetsy ho an'ny teboka tsirairay), fa maninona no tsy ny nofy lehibe sy lehibe kokoa?
Ity fialan-tsasatra tropikaly ity, ny tapakila voalohany, ny fitaovana fakantsary nomerika vaovao, na ny faran'ny herinandro amin'ny fitsangatsanganana kintana dimy dia azonao atao, noho ny fandaharam-pianarana hafa miaraka amin'ny valim-panamarinanao.
Miantehera amin'ny fandaharam-pianaranao miaraka amin'ireo tolotra mifanaraka aminao, mifototra amin'ny tombontsoanao sy ny fiainanao. Azonao atao ny mampiditra zavatra avy amin'ny saram-pivarotana amin'ny Amazon.com na ny saran-dalan'ny birao mandeha ho azy any Brezila. Tohano ny fanavaozana izay misy ny fandaharana tianao indrindra. Ohatra, ny orinasa carte de crédit dia mampiditra mpiara-miombona vaovao hatrany. Ny Amerikanina Mpanolotsaina ho an'ny Mpisambotra dia vao haingana no nandray an'i Uber sy Plenti, manome ny fidirana amin'ny entana sy serivisy amin'ny anarana lehibe tahaka an'i Exxon, Nationwide ary Macy.
Raha manana teboka maromaro niparitaka tamin'ny fandaharam-pivoarana maromaro ianao dia diniho ny famindrana azy ireo ho amin'ny programa iray tokana mba hahafahanao mameno ny herin'ny fanavotana. Ho an'ny fialan-tsasatra mahafinaritra mandritra ny 10 andro any Frantsa amin'ny fahavaratra manaraka, dia te-hametraka ny toeranao ao anaty harona iray ihany ianao mba hahatonga io dia io ho zava-misy.
Mahazo ny tena manan-danja
Toy ny zavatra maro eo amin'ny fiainana, ny fotoana dia ny zava-drehetra. Marina izany rehefa tonga amin'ny famindrana kilaometatra sy teboka. Raha toa ianao ka mahavita zavatra, dia mety ho afaka hanolotra tolotra manokana izay omena tombontsoa sasany (bebe kokoa!) Omena ireo mpanangona.
Ny fandaharan'asam-pitokisana dia maniry ny hisafidy azy ireo (ho an'ireo mpifaninana aminy) mba ho mpandray ireo hevitra sarobidyo mba hahafahan'izy ireo misedra anao amin'ny fametrahana fotoana voafetra.
Ireo mpamory hetra dia manasonia ny fanamafisana ny mailaka sy ny fampandrenesana ny SMS mba hahazoany vaovao sy tolotra farany. Manaova teboka ihany koa hanarahana ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny media sosialy ho an'ny fifanintsanana manokana, ary aoka ho vonona ny hiverina amin'ny asa raha hitanao izy ireo.
Famaritana ny fialan-tsasatra tsara indrindra
Amin'ny ankapobeny, ny karajia sy karama mahatoky anao dia azo alefa amin'ny mpandray anjara hafa miaraka amin'ny mpivarotra iray amin'ny 1: 1 - izay midika hoe 50,000 Citi Thank You® ny soso-kevitrao, ohatra, dia hivadika ho 50,000 Flying Blue Miles Miles (azo vidiana amin'ny Air France sy KLM).
Indraindray ianao dia hahita tombony be dia be, izay, ohatra, ireo tebiteby 1 000 Thank You® dia hahalasa anao 1.500 Hilton HHonors. Ny fandaharam-pianarana tsirairay dia manana ny fiteniny manokana, koa aoka ho azo antoka ny manamarina azy ireo. Jereo koa ny zavatra toy ny fandaniana farafahakeliny sy farafahakeliny, famaranana, ary daty mainty.
Maro ny globetrotters toy ny karatra famindram-bola an'i Chase Sapphire. Manome in-droa ny teboka amin'ny fifanakalozana ho an'ny dia. Raha toa ka tompon'ny carte de Chase Sapphire ianao, ampiasao ireo teboka Chase Ultimate Rewards amin'ny sanda feno (1: 1) miaraka amin'ny fandaharam-pizarana matetika ho an'ny sidina avy amin'ny British Airways, United, Korean Air, Southwest sy Virgin Atlantic, na trano fivahinianana miaraka amin'i Hyatt, Marriott, The Ritz-Carlton, ary ny IHG.
Rehefa vonona ny hanosika ny hevitrao amin'ny namana mpiara-miasa iray ianao, dia tadidio fa tsy ny fifindrana rehetra dia mitranga avy hatrany - ny sasany mety haka ora vitsivitsy na andro vitsivitsy. Izany no mety ilainao hatao rehefa mikarakara fiaramanidina sy hotely. Ny vaovao mahafaly dia ny mpamily sasany (tahaka an'i Lufthansa sy Amerikana) mamela anao hametraka seza an-tserasera, manome anao fotoana vitsy handefasana kilaometatra sy teboka hitondrana ny kaontinao.
Ny teboka farany iray: rehefa manapa-kevitra ny amin'izay handefasana ny hevitrao sy ny fomba hanavotana azy ireo, ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia manaiky fa ny tsara indrindra dia ampiasaina amin'ny dia lavitra amin'ny valisoa tsy dia lavitra toy ny entana. Koa satria manana safidy maro isan-karazany ianao raha hividy ny vidiny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny zava-misy ao amin'ny tontolo tena izy, dia mety hiafara bebe kokoa amin'ny tranokala mifandraika amin'ny fandaharam-pivoaranao ianao.
Vaovao mahafaly ho an'ireo izay tsy miraika. Miandry izao tontolo izao!
Fihetsiketsehana Harona Hahoana Izay Tianao Hiditra amin'ny 2016
Fomba telo hanohanana ny fanampiana iraisam-pirenena tsy misy volontaires
Miaraha miasa sy mahazo vola
Fairy Tale Honeymoons any Florida
San Francisco Gay Guide: Castro, Hayes Valley & Mission Edition
Ireo zavatra tokony ho fantatra momba ny fihenam-bidy amin'ny toaka
10 Fomba Fomba Hananana Miles Miles (miaraka Aminao eny Amin'ny Tany)
Pros sy ny tsy fahampian'ny trano fialan-tsasatra
6 Betsaka Cocktail Bars ao Paris: Toerana ho an'ny zava-pisotro misy alikaola
Fandevenana any Orogoay
Silvesa Cruises 'Silver Whisper Suites
Ny fomba hahitan'ny Airfare mora vidy
Honeymoon teo amin'ny fiarahan'ny ranomasina
Torohevitra momba ny fiarovana ny rano ho an'ny tany efitra ao Phoenix
Poinsettia: Flower Christmas Meksikana
Nitsidika ny tranoben'i Capitol Building ao Arkansas